Yan Aung: စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ
အနော့်ကို ကြောရာလားလို့ လန့်တွားရာပဲ... :P
အင်း စကားပြောချင်တဲ့လူတွေ ပြောနေပါစေ.. အချိန်တန်ရင် ပီးသွားမှာပါ..။ အမှန်တရားက စကားပြောပါလိမ့်မယ်.. အားဖြည့်လိုက်ပေါ့.. ကိုယ်ဝါသနာ ပါရာကို သူများတွေကြောင့်တော့ မစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့ကိုရန်ရေ.. အဆင်ပြေပါစေ..
ဆိုးသွမ်းနေပါလား ကိုရန်ကြီး. စိတ်လျော့ထားပါဗျာ. မနက်က ကိစ္စတွေ ညနေရောက်တော့လည်း အားလုံး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားမှာပါ. :)
သာမီးက အဲဒါတွေ ကြိုတိရို့ ... ကြောက်ရို့ဂျီတော့မှာ မပွားရဲဝူး..။ ဂျီတော့ ၀င်ရင်တောင် ကိုယ်ဖျောက်ထားတယ်..။ ကိစ္စရှိ မှ .. နည်းပညာ အခက်ခဲ ရှိမှ အကူညီတောင်းသင့်တဲ့ ဒူကို တောင်းရဲတယ်..။ ဒါတောင် သာမီးကိုရော ဘယ်ဒူတွေ ဘာကြောနေတေးလဲ တိဝူး..။ ဘလော့က မိတ်ချွေဟာ ဘလော့ပေါ်မှာ ဆုံကြတာပဲ ကောင်းပါဒယ်..။ ဦးရေခဲညှပ်ရဲ့ ဗားချင်းတစ်က အားကြီး ချိုလို့တောင်းတယ်..။ သာမီးကိုတော့ ဘယ်ဒူတွေ ဘာတွေ ကြောမှန်းမတိလို့မတိလက်စနဲ့ ပဲ ကြော်ကြော်ကြီး ဆက် ဘလော့နေတယ်..။
ဒီလိုပါပဲ ကိုရန်အောင်ရေ ... ဆက်လျှောက် ... ဟဲ ဟဲ ... အေးဆေးပါ ... :)
ဂွတ်ထ ဂွတ်ထ :D
စိုင်းစိုင်းဂွမ်းလှိုင် ကို အဲဒီသီချင်း ဆိုခိုင်းလိုက် :P
အစ အဆုံး ဖတ်ပြီး ဘာပြောရမှန်းကို
Hip Hop သီချင်းလည်းရေးပါလား
အကိုရာ.. (;P) (;P)
u yan yal...
cool down par byar. pee thyar mar pop nawt.het het het... hin hin hin... :D
tar tar ma par buu naw hin hin hin ;D
new lay yay par oo har .. nhar mhar old tway be` read nay ya tal ..dpost ko read ter by heart ya tot mal .. :(